အောကျတိုဘာ 22, 2019 – Healthy Life Journal
– စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်အလိုက် အောက်ပါအားကစားသုံးမျိုးကို ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) တင်းနစ်ကစားခြင်း အံ့အားသင့်စရာကောင်းသော အကျိုးကျေးဇူး- ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းစေတာကြောင့် ကျောရိုးနဲ့ တင်ပဆုံရိုးနေရာတွေကို ဟန်ချက်ညီမျှစေပြီး ခါးနာတာမဖြစ်အောင်...
၊ ဇွန် ၊ သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သွားဆရာဝန်တွေက သင့်ကို သိစေလိုတဲ့အချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ (၁) လူတွေက သင့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတွေ့တဲ့အခါ အရင်ဆုံး သူတို့သတိထားမိတာက သင်ရဲ့မျက်လုံးတွေဖြစ်ပြီး ဒုတိယအနေနဲ့ သတိထားမိတာက သင့်သွားတွေပါပဲ။ တတိယအနေနဲ့ကျမှ သင့်ဆံပင်တွေကို...
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. အရိုးကျိုးတာကို စတီးချောင်းထည့်ပြီး ကုသမှုအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. အရိုးထဲကို စတီးချောင်းထည့်ပြီး ကုတာကအခုမှ ထည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုထည့်ပြီး ကုသတာက ကြာခဲ့ပါပြီ။ ပေါင်အရိုးကျိုးတယ်၊ ခြေထောက်အရိုးကျိုးတယ်ဆိုရင် စတီးချောင်းထည့်ပြီး ကုသတာကို Intra-medullary...
ဒေါက်တာညီညီကျော် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. အခုအခါမှာ ကီဖာကို လူအတော်များများက သောက်သုံးနေကြပါတယ်။ ကီဖာသောက်တာက ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးရရှိစေနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ကီဖာ (Kefir)ဆိုတာ နွားနို့ ဒါမှမဟုတ် ဆိတ်နို့က ထုတ်တာပါ။ ဒီတော့ ပရိုတင်း၊...